Kushubile uGordhan evala ikhefu kwabakwa-Eskom | Isolezwe
Izindaba / 7 December 2018, 09:27am / BONISWA MOHALE
UNGQONGQOSHE wamaBhizinisi kaHulumeni, uMnuz Pravin Gordhan uveze ukuthi asikho isikhulu sakwa-Eskom esizothatha ikhefu kuze kuxazululwe izinkinga ezibhekene nale nkampani kahulumeni. Isithombe: Thobile Mathonsi African News Agency (ANA)
UNGQONGQOSHE wamaBhizinisi kaHulumeni, uMnuz Pravin Gordhan uveze ukuthi asikho isikhulu sakwa-Eskom esizothatha ikhefu uma zingakaxazululwa izinkinga zokucinywa kukagesi kule nkampani.
Uthe le nkampani ibisebenzisa uR1 billion ngenyanga ukuthenga udizili ukuze kukhanye ezweni, okuyinto ezoncishiswa.
Izolo uGordhan uthe bonke abasebenzi abawu-40 000 nezikhulu zakwa-Eskom kufanele bakhumbule ukuthi kunabantu abawu-60 million bakuleli abadinga ugesi nomnotho okufanele ukhule.
Ucele i-Eskom ukuthi ize nohlelo olucacile lokuthi izolwa kanjani nenkinga yokuphela kukagesi nokuthi bazojeziswa kanjani abangawenzi umsebenzi.
“Kufanele kucace ukuthi kuzokwenzekani uma i-Eskom ingalufezi uhlelo lwayo lokulungisa isimo. Zonke izikhulu ngeke ziye ekhefini futhi ngifuna zihambele iziteshi zikagesi, ziyobheka okwenzekayo bese zibikela izwe ukuthi kwenzekani eziteshini ezihlukene, kusukela ngoLwesibili,” kusho uGordhan.
Uthe iziteshi ezintsha zikagesi, okuyiMedupi neKusile azikhiqizi ugesi owanele futhi izinsimbi ezifakwa kulezi ziteshi azikho ezingeni.
Izinkampani ezifaka izinsimbi ezingekho ezingeni zizojeziswa ngokuhamba kwesikhathi.
“NgoDisemba 15 kuya esontweni lokuqala likaJanuwari asilindele ukuthi kucinywe ugesi ngoba ziyavala izinkampani. Phakathi kukaJanuwari kuya kuMashi sifuna ukutshela umphakathi ukuthi ngeke ucinywe ugesi ngokwesigaba sesibili. Ukucima kukagesi akuhlukumezi izingane kuphela kodwa kubalekisa nabatshalizimali, kwenze nomnotho ungakhuli ngendlela efanele,” kusho uGordhan.
Isikhulu esiphezulu sakwa-Eskom, uMnuz Phakamani Hadebe, sithe amalahle akhona eNingizimu Afrika kodwa inkinga wukuthi akuhlelwanga kahle ukuthengwa kwawo ezimayini.
USihlalo weBhodi lakwa-Eskom, uDkt Jabu Mabuza uthembise abantu baseNingizimu Afrika ukuthi banalo uhlelo lokuqeda izinkinga e-Eskom, kusele ukuthi balunike uhulumeni.
Uveze ukuthi ngonyaka ozayo unethemba lokuthi isimo sizoba ngcono ngoba sebeqalile ukulungisa inkinga yamalahle nekadizili odingeka eziteshini zikagesi.